အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ခရီးသည်
Posted by Pyiet Oo Aung at 2:16 AM
ကိုယ်ကမပေးပဲ ကိုယ်လိုချင်တာချည့်ပဲလိုက်ရှာနေရင်တော့ ဘယ်တော့မှတွေ့မှာ မဟုတ်ဘူး ကိုအတ္တရ.်
အဲ ဂုဏ်သိက္ခာမရှိပဲ မာနရှိနေလို့လဲ တလွဲမာနဖြစ်နေမှာလေ ကိုမာနလဲ ဂုဏ်သိက္ခာကို တွေ့အောင်ရှာနော်
ရေးချင်သလိုရေးတာကို ခံစားချင်သလို ခံစားသွားပြီနော် ဟတ်ဟတ်
အစ်ကိုရေးတာတွေ မဖတ်ရတာတောင်ကြာပြီ ။ အားပေးသွားတယ်နော်။
တွေးစရာလေးတွေ ယူသွားတယ် ညီရေ။
ဒီလိုပဲ အတ္တနဲ့ မာနနဲ့က တွေ့နေကျ .... အနက်ရေ
ehh... cognitively thread!
я думаю: благодарю. а82ч